China Hydraulic Accessories Manufacturer and Supplier - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd.
WENAP dia mpamokatra sy mpanamboatra matihanina avy amin'ny China ho an'ny famolavolana ny fifangaroan-tsambon'i Norma na tsy misy mari-pamantarana. Ny rambony dia voamarina amin'ny 150, 300, 400, 600, 900, 1500 ary 2500Â lbs na 10, 15, 25, 40, 64, 100 ary 150. Misy karazam-bolo maro samihafa azo alaina, arakaraka ny fananganana. Ny rambony ampiasaina amin'ny fitaterana (ny orifice, ny kofehy, ny rindrina, ny jamba, ny rambony, ny fametahana, ny fihenam-bidy ary ny fampihenana) dia azo jerena amin'ny endrika maro, toy ny fananganana, ny flat, ary ny fiaraha-mikorana.
Ny WENAP dia mpanamboatra sy mpamatsy any Shina, mpamokatra fiarakodia ho an'ny famolavolana fandefasana fiara, fantsom-pifandraisana, fametahana fitrandrahana, fametahana fatorana, fametahana sns., Sns. Ny fanontanianay manokana, ny valinteny matihanina sy haingana dia hatolotra.
DIN Bite Type Fitrandrahana
Cixi Wenap International Trading Co., Ltd. dia mpamatsy vaovao eto amin'ny aterineto, saingy manana traikefa efa za-maherin'ny 5 taona izahay. Ny orinasa tsara dia tsara amin'ny DIN 2353 Bite Type Tube Fitting, ny santionany na ny sary dia horaisina. Miezaka foana izahay hampihena ny fandaniana mba hampitomboana ny lanjany ho an'ny mpanjifa ary manantena amim-pahatsoram-po amin'ny fiaraha-miasa amim-pahatsoram-po miaraka aminao, mba hamoronana ny ho avintsika mahafinaritra.
Ny famolavolana mihetsiketsika dia mamarana ny fanombohana O ring
Cixi Wenap International Trading Co., Ltd. dia mpamatsy vaovao ety anaty aterineto, fa manana traikefa momba ny fahaizana 5 taona mahery. Ny BSP ny kofehy vita amin'ny kodiarana amin'ny bobongolo amin'ny endriky ny fametahana kofehy O-ring, ny fitaovam-pamokarana hosoka ary ny kapila. Manantena amim-pahatsorana izahay amin'ny fiaraha-miasa amim-pahatsoram-po miaraka aminao, mba hamoronana ny ho avinay mahafinaritra.